AC Milan oo kaddib Musacchio markan qarka u saaran Franck Kessié (Kulan 3 saacadood socday oo xalay dhacay) – Gool FM
(Milano) 04 Maajo 2017 – Waxaa xalay fiidkii kulan qaatay 3 saacadood iyo 20 daqiiqo yeeshay maamulka AC Milan iyo Atalanta kaasoo ay xitaa fadhiyeen guddoonka AC Milan iyo madaxwaynaha Atalanta kaasoo ka dhacay Milano.
Kooxda AC Milan ayaa doonaysay inay heshiis la gaarto Atalanta oo ay ka doonayso laacibka reer Ivory Coast ee Frank Kessie kaasoo ay isaga heshiis shakhsi ah la gaareen iyagoo si wayn isu fahmey wakiilkiisa Roberto Atangana iyagoo la diyaar ah 28 milyan oo euro iyo 2 milyan oo mushahar ah + bareemiyo, iyagoo dhankaa mushaharka ku dilaya Roma.
Kooxda AS Roma oo Jannaayo heshiis la gaartey kooxda Atalanta ayaanse weli heshiiska ka bixin, balse waxaa fooska leh Milan oo sida ay saxaafadda Talyaanigu qoreeyso ka faa’iidaysanaysa laacibka oo iyada door bidaya, xitaa hadduu weli rahman yahay kulan kale oo dhexmari doona Atalanta-Roma.
Yeelkeede, kulankii xalay oo u muuqda mid la isku fahmey ayay Atalanta codsatey in go’aanka kama dambaynta ah loo rido kaddib 13-ka Maajo oo ku beegan marka uu dhacayo kulanka ciyaareed ee Atalanta-Milan oo ku tartamaya boosaska EL.
Milan ayaa markii ugu horreeysey muddo 5 sano ah u muuqata koox ku firfircoon suuqa kala iibsiga oo miisaaniyad u hayaan, waxaana shalay soo baxayay inay durba la heshiiyeen daafaca Villareal ee Mateo Musacchio, waxay kaloo wada xaajood la fureen wakiillada Duncan iyo Pellegrini oo u wada safta Sassuolo oo ay khadka dhexe uga dheelaan.
Milan oo doonaysa inay dib ugusoo laabato figta sare ee ay ka maqnayd muddooyinkii dambe ayaa doonaaysa inay kacaamiso khadkeeda dhexe iyadoo sidoo kale midabaynaysa waaxaha kale sida daafaca dhexe iyagoo sidoo kale doonaya weeraryahan fasalkii dhalin kara ugu yaraan 20-25 gool.